ऊर्जा भविष्य र डरपोकको समृद्धि - UrjaKhabar ऊर्जा भविष्य र डरपोकको समृद्धि - UrjaKhabar
ऊर्जा क्षेत्रको लाभदायक योजनामा लगानी जुटाउने प्रयास नगरी अनुदान माग्नु भनेको आफ्नो शक्ति र क्षमता पहिचान गर्न आफैं डराउनु हो
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपालबीच प्रस्तावित साझेदारी परराष्ट्रको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न उचित हुँदैन। यस सहयोगले नेपालको ऊर्जा भविष्यमा पर्ने प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक असरको विस्तृत र सही मूल्यांकन हुन जरुरी छ।
एमसीसीका सर्तहरूले नेपाललाई बिनातयारी भारतीय बिजुली बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा धकेलिदिन्छ र फलस्वरूप नेपालको जलविद्युत् विकासमा घातक चोट लाग्ने सम्भावना उत्पन्न गर्छ। प्रसारण लाइनजस्ता लाभदायक योजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान किन चाहिन्छ ? नेपालले आफैं सफलतापूर्वक विकास गरिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको आर्थिक सहयोग मिसाएर किन आफ्नै आत्मविश्वास कमजोर पार्ने ?
एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने भनिएको ४५० करोड अमेरिकी डलरको प्रस्तावित आर्थिक सहयोग अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक भाग हो या होइन भन्ने प्रश्नले एकातिर सत्तारुढ नेकपालाई विभाजित गरेको छ भने, अर्कोतिर यस विषयको राष्ट्रिय बहसलाई भूराजनीतिको चर्चामा अल्झाइरहेका छौं।
एमसीसीअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको आर्थिक सहयोग बिजुली प्रसारण लाइन र रणनीतिक बाटो मर्मतका लागि भए पनि यसको अधिकांश भाग प्रसारण लाइनको निर्माणमा केन्द्रित छ। नेपालले भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्झौता गर्नुपर्ने एमसीसीको सहयोगको एक मुख्य पूर्वसर्त रहेको छ। एमसीसीको चाहनाअनुसार केही महिनाअगाडि नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सम्झौता भयो। तर यस्तो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको हितमा छैन र यसले हाम्रो जलविद्युत् योजनाहरूको विकासमा ठूलो बाधा बन्ने सम्भावना उत्पन्न गर्छ। भारतीय बजारको आधारमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने हो भने त्यहाँका जटिलताको पृष्ठभूमि बुझ्न पनि जरुरी छ।
हालको परिस्थितिमा भारतको बिजुली बजारमा मुनाफाको रूपले धेरै आकर्षण छैन। हाल भारतमा आफ्नो मागअनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने पर्याप्त क्षमता छ र लगभग ३० हजार मेगावाट पावर प्लान्टहरू आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कममा चलिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले भारतको बिजुली बजारमा दिगो रूपमा निर्यात गर्न मुस्किल मात्र नभएर त्यसको आधारमा लगानी जुटाउन असम्भव हुन्छ। भारतको बिजुली बजार अझै बन्ने क्रममा छ। पूर्णतया परिपक्व भइसकेको छैन। यसमा नीतिगत सुधार, आधुनिकरण र वित्तीय व्यवस्थापनका काम अझै धेरै बाँकी छन्। भारतका सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश बिजुली वितरण कम्पनी वर्षकै घाटा र तिर्न नसकेको कर्जामा डुबिरहेका छन्। यी कम्पनीहरूको सञ्चित घाटालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले अर्बौं डलरको ‘उज्ज्वल डिस्कोम एस्योरेन्स एस्योरेन्स (यूडे) सन् २०१५ मा घोषणा गर्‍यो र हालसम्म ३२ राज्यले यसबाट सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।
भारतमा बिजुली योजनाहरूका लागि पर्याप्त अवसर छन्। हाल जलविद्युत् योजना मात्र पाँच हजार मेगावाट बन्ने क्रममा छन्। त्यहाँको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा जलविद्युत्को धेरै सम्भावना छ (उदाहरणका लागि अरुणाञ्चल प्रदेशमा मात्रै ५० हजार मेगावाटको क्षमता छ )। यस्ता जटिल कारणले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी या संस्थानले भारतको बिजुली बजारमा ठूलो परिणाममा सफलता हासिल गरेको उदाहरण छैन। अरू पाँचदस वर्षको अवधिभित्र भारतको बिजुली बजारमा कुनै ठूलो वृद्धि, मूल्यमा सुधार र संरचना परिवर्तन आउने सम्भावना कमै छन्।
भारतको ऊर्जा बजारमाथि ध्यान राख्नु नेपाललाई जरुरी छ तर सम्भावना र चुनौतीलाई पर्याप्तरूपमा अध्ययन नगरी एमसीसीको पूर्ण सर्त पूरा गर्ने हतार गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु नेपालको ऊर्जा विकासका लागि घातक हुन जान्छ। नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुईतर्फी हुन्छन्। त्यसले नेपाललाई भारतको बजार खोलिदिन्छ भने भारतलाई पनि नेपालको बजार खोलिदिन्छ। प्रतिस्पर्धा दुईतर्फी हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतको भन्दा महँगो हुन्छ। भारतको बिजुली बजारमा बिक्री मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल पूर्णरूपले तयार छैन।
हाल प्रयोगमा रहेको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केवर–मुजफ्फरपुर यस घातक प्रतिस्पर्धाको एक उदाहरण हो। वार्षिक करिब ३५०–४०० मेगावाट यो लाइनमार्फत नेपालमा आयात हुने गर्छ। यो लाइनबाट आउने भारतीय बिजुली लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहज भयो भन्ने बुझाइ छ। तर त्यो बुझाइको एक पक्ष मात्र हो। लोडसेडिङ समाप्त मात्र गर्ने प्रमुख कारण पनि थियो। सन् २००७ मा त्यो लाइनको घोषणा भएपछि नेपालमा निर्माण हुनुपर्ने ३००– ४०० मेगावाट जलविद्युत् योजना र प्रसारण लाइन स्थगित या विलय भए। एकातिर जलविद्युत् योजना स्थगित भए। अर्काेतिर ढल्केवर–मुजफ्फरपुर आउन ढिलो भयो –लोडसेडिङको जड यही थियो।
सम्भावना र चुनौतीलाई पर्याप्तरूपमा अध्ययन नगरी एमसीसीको पूर्ण सर्त पूरा गर्ने हतार गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु नेपालको ऊर्जा विकासका लागि घातक हुन जान्छ।
नेपाल–भारत अन्तर्देशीय लाइन बन्छ भन्ने घोषणा हुनेबित्तिकै नेपालको ऊर्जा बजारको आर्थिक आधारहरू र बुझाइमा तत्कालै परिवर्तन आयो। भारतको सस्तो बिजुलीविरुद्ध नेपालको बिजुलीले प्रतिस्पर्धा सक्दैन र अब विस्तारै भारतबाट आयात हुने बिजुलीले नेपालको मागलाई पूरा गर्ने भयो। ठीक यस्तै भयो ढल्केबर–मुजप्mफपुर लाइनको घोषणापछि। निर्यात गर्ने भनेर बनाएको लाइनबाट आज नेपालको आधा जस्तो माग पूरा गरिरहेको छ। भोलिका दिनमा नेपालको उत्पादन बढ्छ अनि निर्यात गर्छ भने सपना बोकिरहेका प्रवक्ताहरूलाई सपनाको सट्टा तथ्यांक केलाउन आग्रह गर्छु।
भारतको बिजुली बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको तयारी पुगेको छैन। यस्तो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको माध्यमबाट बिजुली बजार ‘सिंक्रोनाइज’ गर्न नेपालले हतार गर्नुपर्ने कारण थिएन। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र बजार ‘सिंक्रोनाइज’ बिना पनि नेपालले आफ्नो बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्छ। निर्यातउन्मुख जलविद्युत् योजनाहरूबाट नेपालको बजार नछोइ सीधै भारतको बजारलाई समर्पित प्रसारण लाइनको माध्यमद्वारा बिजुली पुर्‍याउन सकिन्छ। यस्तो एकल लक्ष्य समर्पित प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा बजारलाई भारतसँगको प्रतिप्रस्र्धाबाट जोगाउँछ। यसकारण एमसीसीको सहयोग प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्व सर्तलाई संशोधन गर्नुपर्छ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोगको अधिकांश भाग काठमाडौं, हेटौंडा बुटवलको प्रसारण लाइनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रसारण लाइनमा अनुदान नभए पनि व्यापारिक रूपमा लाभकारी छ। एमसीसीले पनि कुनै देशमा लाभ नहुने आयोजनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैन। काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल जस्ता महत्त्वपूर्ण, लाभकारी र सफलता सम्भव रहेका योजनाहरूमा अनुदान किन चाहिन्छ ? यस्तो योजनाका लागि नेपालले आफ्नै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
गरिबीको कारण नेपालको कतिपय क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउन असम्भव छ। तर ऊर्जा क्षेत्रको लाभदायक योजनामा लगानी जुटाउने प्रयास नगरी अनुदान माग्नु भन्नेको आफ्नो शक्ति र क्षमता पहिचान गर्न आफैं डराउनु हो। आफैंले सिर्जना गरेको अवसरहरू आफैंले कब्जा गर्न डरायो भने विकास कसरी हुन्छ ? डरपोक समृद्धि कस्तो होला ?
नेपाललाई अमेरिकासँग साझेदारी र एमसीसीजस्तो आर्थिक सहयोग जरुरी त छ तर ऊर्जा क्षेत्रको प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा होइन। यो प्रसारण लाइनमा नेपालले आफंै पहल गर्नुपर्छ र भारतको बिजुली बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिने पूर्वाधार निर्माण आफैंले गर्नुपर्छ।
सन् २०१४ मा नेपालले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसीअन्तर्गत आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। तर विगतका पाँच वर्षमा यो अनुरोधको तर्क र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन भइसकेका छन्। देशभरको व्यापक लोडसेडिङ अन्त्य भयो। विद्युत् प्राधिकरण वर्षांैपछि नाफा कमाउन सफल भएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ। कुलमान घिसिङ यस क्षेत्रको लोकप्रिय अगुवाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको उपलब्धिको पहिचानमा अनेक राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मानित हुनुभएको छ। विगतका पाँच वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका प्रगति समकालीन नेपालको एउटा अद्वितीय र सकारात्मक निशान हो। यी उपलब्धिहरूमा नेपालीकोे आत्मविश्वास, मनोबल र भविष्यका लागि आशा गाँसिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालीले आफंै यस्तो सकारात्मक संरचना निर्माण गरिरहेको बेला किन एमसीसी या अन्य दाताहरूको अनुदान ल्याएर राष्ट्रिय गौरवको विषय खुम्च्याउने ?
नेपालमा अरू क्षेत्रहरू छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र विशेष गरी अनुदानको खाँचो छ। एमसीसी र मित्रराष्ट्रहरूको उदारता त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो सफलताको प्रमाणका लागि, आफ्नो भविष्यलाई नीरचित्त गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान र परोपकार होइन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउनुपर्छ।
केही महिनाअघि काडमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले नेपालको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्दै विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गरेका थिए। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषण आफंै पनि सुन्नुपर्‍यो। नेपालीले आफ्नो भविष्य निर्माण आफंै गर्ने अवसर पाउनु पर्‍यो।